အရိယသစ္စာ ကို နားလည်ခြင်းအစစ် (သို့) သစ္စာတရား နှလုံးသွင်းပုံမှတ်စုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရိယသစ္စာ ကို နားလည်ခြင်းအစစ် (သို့) သစ္စာတရား နှလုံးသွင်းပုံမှတ်စုများ
အရိယသစ္စာ ကို နားလည်ခြင်းအစစ် (သို့) သစ္စာတရား နှလုံးသွင်းပုံမှတ်စုများ
Posted by True Answer on Feb 10, 2012 in Creative Writing, Think Different |5comments
ဗုဒ္ဓ သည် လောကီကြီးပွားရေးများကို သာမက ၊ လောကီရော- လောကုတ္တရာမှာပါ ကျေးဇူးများသည့် habitual perception ကိုကျော်လွန်သော ချမ်းသာအအစစ် အမှန်တရား (အရိယသစ္စာလေးပါး)၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာအပါအ၀င် သစ္စာတရားတော်များ ကို ၄၅ ၀ါ ပတ်လုံး ဟောကြားခဲ့လေသည်။
ဗုဒ္ဓသည် လောကီကောင်းကျိုး ကြီးပွားရေးများကို မငြင်းပယ်သော်လည်း လောကီကောင်းကျိုးများထက် ကျော်လွန်သော ချမ်းသာ (နိရောဓသစ္စာ)လည်းရှိသေးကြောင်း၊ ထိုချမ်းသာကို ရရှိရန် – ထိုချမ်းသာရကြောင်း အကျင့် (မဂ္ဂသစ္စာ)၊ ထိုချမ်းသာကို တားဆီးသောအကြောင်း (သမုဒယသစ္စာ)၊ ထိုချမ်းသာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောတရား (ဒုက္ခသစ္စာ) စသည့်ဖြင့် (အရိယာသစ္စာလေးပါး) ကို ပါ သုတမယပညာ၊ စိန္တာမယပညာ၊ ဘာဝနမယပညာ အားဖြင့် သိစေခြင်းငှာ ထင်ရှားစွာ ပြည့်စုံစွာ သင်ကြားပြသခဲ့လေသည်။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ သည် အရိယသစ္စာလေးပါးမှ နှစ်ပါးဖြစ်သော သမုဒယသစ္စာ နှင့် ဒုက္ခသစ္စာကို ထပ်မံ analysis လုပ်ကာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
သို့ရာတွင် တချို့သော လောကီ စည်းစိမ်ချမ်းသာလောက်ကိုသာ အဓိကထား-အဟုတ်ထင်သည့် ရုပ်ဝါဒီများသည် ဘာဝနာမယပညာ (သို့) အကျင့်တရား practice မပါဝင်ဘဲ ….
အရိယသစ္စာ နှင့် လူ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဟူသော စကားကို တွင်တွင်သုံးလျှက် (သို့)
၁) ဗုဒ္ဓတရား အရိယသစ္စာလေးပါး နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ တို့ကို habitual perception လောကီအတွက်သာ ဖြစ်လေဟန် ၊
၂) အရိယသစ္စာလေးပါး နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ တို့သည် habitual perception ထက်ကျော်လွန်သော အမှန်တရား (ပရမတ္ထသစ္စာ) နှင့် ဘာမှ မသက်ဆိုင်လေဟန် ယနေ့ရွာထဲတွင် လီဆည် ရေးသား- ဈေးချနေကြလေသည်။
၃) ထို အရိယသစ္စာလေးပါး နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတို့ကို ဈေးချရေးသားဝါဒ ဖြန့်ကြကုန်သော အဆိုပါ ရုပ်ဝါဒီတို့သည် habitual perception ထက်ကျော်လွန်သော အမှန်တရား(ပရမတ္ထသစ္စာ) နှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသော ထို အရိယသစ္စာလေးပါး နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ ကို မဆိုထားဘိ၊ …..
habitual perception ဖြင့် နားလည်ရန်လွယ်ကူသော…….
သမုတိသစ္စာ လူသား များအပါအ၀င် တိရစ္ဆာန်များပါ ချမ်းသာရေး- လောကီကြီးပွားကြောင်း ဂရုဓမ္မ၊ ငါးပါးသီလပိုင်းကိုပင် မှန်ကန်စွာ မယူနိုင်ပဲ ၊ လူသား များအပါအ၀င် တိရစ္ဆာန်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖျက်ဆီးမည့် ကိလေသာ အားပေးသည့် အယူမှားများဖြစ်စေရန် ယနေ့ ရွာထဲ ၀ါဒဖြန့်နေလေသည်။
ထိုသူများအတွက်လည်းကောင်း၊ အခြားသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက် လည်းကောင်း အမှန်တရား အလို့ငှာ
အရိယသစ္စာ ကို နားလည်ခြင်းအစစ် (သို့) သစ္စာတရား နှလုံးသွင်းပုံမှတ်စုများ စာအုပ်ကို မျှဝေအပ်ပါသည်။
အမှန်တရားအတွက် မှတ်ကျောက်သည် ပြဿနာ၊ ပူလောင်ယောက်ယက်ခတ်မှုများ ကို ဖြစ်စေသည့် မိမိကိလေသာကို မိမိ မည်မျှ စွန့်နိုင်သလဲ ဆိုသော အချက်ဖြစ်လေသည်။
အမှန်တရားအတွက် မှတ်ကျောက်ကို သူတပါး မေးစရာမလို၊ သူတပါးဆီမှာ အရိယာဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်မလို၊ ကြွားဝါနေစရာမလို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ်တတ်သူများ လွယ်ကူစွာ မိမိဖာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လေသည်။
မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်တို့ နှင့် အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ အရသာ၊ တွေ့ထိစရာ၊ ကြံတွေးစရာတို့ တိုက်ဆိုင်တိုင်း – တွေ့ကြုံရသမျှ အပေါ် လောဘ-ဒေါသ-သောက-အကုသိုလ် ဖြစ်ကာ ပူလောင် ဒုက္ခရောက်ရပါမည်။
အဓိကထားရမည့်အရာကို အဓိကမထားတတ်ရင်တော့ မိမိ-စိတ်၏အဓိကထားမှုအမှား(ငြိတွယ်မှု ) clinging / central emphasizing မှ ပူလောင်ယောင်ယက်ခတ်အောင် အကုသိုလ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါတော့သည်။
မိမိစိတ်၏အဓိကထားမှုအမှား(တရားခံအစစ်ကို) မသိခြင်းကြောင့် (၀ါ) အ၀ိဇ္ဇာကြောင့် ဟိုလူကြောင့် ၊ ဒီလူကြောင့်၊ ဟိုလူ့လုပ်ရပ်ကြောင့်၊ ဒီလူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် စိတ်ညစ်ရသည်။
ပြဿနာဖြစ်ရသည်။ ဆင်းရဲရသည်။ အကုသိုလ်ဖြစ်ရသည်။ ဘာဖြစ်ရသည်- ညာဖြစ်ရသည် စသည့်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ သတ္တ၀ါ ကို သာ အပြစ်တင်ပါသည်။ တရားခံဖမ်းပါသည်။
ကျေးဇူးမဲ့စေခဲ့ကြာင်း မာဂဏ္ဍီပုဏ္ဏားကြီးနှင့် ပုဏ္ဏေးမတို့ ကြီး နှင့် သမီးမာဂဏ္ဍီသူငယ်မဇာတ်လမ်း (အပ္ပမာဒ၀ဂ်-သာမာဝတီဝတ္ထု) ကား သက်သေပင်ဖြစ်လေသည်။
ရုပ်ဝါဒီများ အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်
ဆရာတော်နဲ့ တရားဟောပလ္လင်ကြီး လိုက်ပါ့ဗျား…လွန်စွာ ကြည်ညိုဖွယ်အတိ ဖြစ်ရပါ၏။ သာဓု သာဓု သာဓု…။
ဗမာပြည်က ဘိန်းခန်းများ . . . . . ။
(ဖားကန့်မှာ ပြောပါတယ်။ လူတွေကို ဖီလ်တွေတက်နေအောင် ၊ ငြိမ်သွားအောင်၊ ဘာမှ မလုပ်ချင်တော့အောင် လုပ်ပေးနေတာ။)
အင်း . . . အဲဒီလို ဘိန်းခန်းတွေ များလာရင်တော့ အလုပ်လက်မဲ့တွေများပြီး ကမ္ဘာကြီးတော့ ရင်လေးစရာပဲ၊
သိနေတော့လည်း စိတ်မအေးရဘူလေ။ ဘုရား . . . ဘုရား . . . ။
true answer သံဃာတစ်ပါးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘုရားသားတော် ပီသစေချင်ပါတယ်။ အခြားသူကို ရုပ်ဝါဒီဘာညာပြောရအောင် အခြားသူတွေရဲ့အယူအဆကို ခြုံမိအောင်လေ့လာပြီးပြီလား၊ အရင်လေ့လာပြီးမှ ဝေဖန်ပါလို့ ဦးဇင်းအကြံပြုလိုပါတယ်။
U zin ရေ တပည့်တော် သံဃာတစ်ပါး လို့ ထင်တဲ့ ဦးဇင်း အထင် မဟုတ်ပါ။
ဦးဇင်းတို့ အထင်နဲ့ ထင်ရာပြောနေလို့ အထင်တွေပဲ ဖြစ်ပြီး အမှန်တရားနဲ့ ဝေးနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
တပည့်တော် သံဃာတစ်ပါး ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာထက်..
အရိယသစ္စာအစစ်ကို နားလည်ဖို့ က ပိုမို အရေးကြီးပါတယ်။
ရုပ်ဝါဒီ existialism အကြောင်း ကို ဆရာဦးဆန်းလွင်(ရှင်အာဒိစ္စရံသီ)မှ ဖြစ်တည်မှုသာ ပဓာန ၀ါဒ ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ စာအုပ်ထုတ်ပြီး ရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တပည့်တော် သိချင်တာက –
[[ရုပ်ဝါဒီဘာညာပြောရအောင် အခြားသူတွေရဲ့အယူအဆကို ခြုံမိအောင်လေ့လာပြီးပြီလား၊ ]] ဆိုတဲ့ ဦးဇင်း စကား ဟာ……
ဘယ်အခြားသူရဲ့ အယူအဆကို ဆိုလိုပါသလဲ ၊…..
ဘယ်သူ့အယူအဆကို တပည့်တော်ကို ခြုံမိအောင် လေ့လာစေချင်နေသလဲ ဆိုတာ တပည့်တော် သိချင်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြစေချင်ပါတယ်။